Kara-barotra tsy manam-paharoa ... er Chip | Martech Zone
Androany tolakandro dia nanao fivoriana mahafinaritra niaraka tamin'ny anay aho consultant Harry Harry Howe ary izahay mpandraharaha fiantohana orinasa, Joe Glaser. Fivoriana nahafinaritra izany satria i Joe sy i Harry dia mahay mandefa an-tariby ny risika sy ny fiantohana rehetra ao anaty fivoriana fohy izay lazain'izy ireo amiko izay tokony hataoko ary matoky azy ireo aho fa hahavita izany.
Mitondra fiantohana izahay noho ny antony maro… na fangalarana fitaovana io na fanimbana, fanenjehana, fiantohana fitsangantsanganana, fiantohana ain'olona sns. Raha ny tena izy, ny sasany amin'ireo mpanjifa orinasa nangatahinay dia mitazona fiantohana ara-barotra farafahakeliny hiarovana anay roa ny orinasany sy ny antsika. Ny orinasa kely mitovy habe amintsika dia mety halevina mora foana ao anaty fatin-javatra iray raha tsy manana fiantohana izahay… noho izany dia sorohinay ny risika ary mandoa ny faktiora isan-taona.
Mpankafy kara-pandraharahana tsy manam-paharoa aho ary namoaka ny farany sy lehibe indrindra an'ny orinasany i Joe izay noheveriko fa tena miavaka ary mendrika hotononina. Poker chip tena izy io miaraka amin'ny antsipirian'ny orinasa amin'ny lafiny iray ary ny mombamomba an'i Joe eo amin'ny lafiny iray. Poker chip… ho an'ny mpiantoka fiantohana… tsy voavidim-bola!
PS: Raha orinasa monina any Indiana ianao ary mila torohevitra matanjaka, tena amporisihiko i Joe Glaser sy ny Thompson Group. Omeo antso izy amin'ny 317.514.7520.
Tags: karatra fandraharahanachip poker amin'ny karatra fandraharahanafiantohana tranojoe glaserpoker chipvondrona thompson
Spredfast: fitantanana haino aman-jery sosialy orinasa